İhale İlanı : Ulukışla Boğazköprü Hattı Km 88+150 Üstgeçit Yapılması İşi | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Angle လမ်းညွှန်ပြားဝယ်ရန်ပါလိမ့်မယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gebze Köseköy signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအစားထိုးပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးများအတွက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း »
UlukışlaBoğazköprüလိုင်းမြေပေါ်ကီလိုမီတာ 88 150 လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး +
ULUKISLA - ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆိုတာဘာလဲBoğazköprü LINE KM + 88 150 4734 အမှတ်မြေပေါ်အပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 429640
19245 ထောက်ပံ့ရေး, အမှတ်စဉ်, နှင့် (ရေကြောင်းအပါအဝင်) ချုံ့နှင့်အခြားအကျင့်ကိုကျင့် backfilling များအတွက်အားဖြည့်မြေကြီးတပြင် mxnumx
ခ) Place: NİĞDE
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 22.10.2019 - 10: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: UlukışlaBoğazköprü De လိုင်းမြေပေါ် 61 500 + Yaptırılacaktır 06 / 12 / 2017 Ulukışla Boğazköprü Hattı 61+500 de Üstgeçit Yaptırılacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ULUKIŞLA BOĞAZKÖPRÜ HATTI 61+500 DE ÜSTGEÇİT YAPILMASI yapım işi 4734…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla - Boğazköprüလိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 61 500 + ယာဉ်များမြေပေါ်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း 16 / 04 / 2018 Ulukışla - Boğazköprüလိုင်းကီလိုမီတာ - 61 + 500 မော်တော်ယာဉ်ကျော်ဖြတ်ဆောက်လုပ်ရေး TC STATE DEMİRYOLLARIETLETMESİအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD)2။ ဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု DIRECTORATE ULUKIŞLA - BOSPHORUS LINE KM: 61 + 500'E VASITA OVERPASS
Ulukışla - Boğazköprüလိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 61 500 + ယာဉ်များမြေပေါ်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလေလံရလဒ် 09 / 05 / 2018 Ulukışla - Boğazköprüလိုင်းကီလိုမီတာ - 61 + 500'e မော်တော်ယာဉ်အပိုပတ်လုပ်ငန်းသည်တူရကီတင်ဒါသမ္မတနိုင်ငံ၏မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ရလဒ်အနေဖြင့်။2/ 2018 GCC ကန့်သတ်တန်ဖိုးဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ဦး စီးဌာန၏ 178620 …
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: (Haydarpasa-တူရကီနှင့်Ulukışla-Boğazköprüလိုင်းအတွက်) လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်းAlüminotermitအရင်းအမြစ်များ 11 / 07 / 2013 TCDD စီးပွားရေး2။ တင်ဒါတင်သွင်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောတင်ဒါနှင့်ကိစ္စရပ်များ၏အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် Aluminotherm ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဆောင်းပါးဆောင်းပါး 1 - အလုပ်ရှင် 1.1 နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များ။ စီမံခန့်ခွဲမှု၏စီးပွားရေးပိုင်ရှင်၊ က) အမည် -2။
Completed အလိုအလျောက်အဆင့် Crossing ဂိတ်တပ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်၏Bogazköprü-Ulukışlaလိုင်း 29 / 03 / 2013 2012 / 168905 တင်ဒါနံပါတ်Boğazköprü-Ulukışlaလိုင်းအဆင့်ဖြတ်ကူးအလိုအလျောက်ဂိတ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးသည်။ MED.MET.İŞL.TEM.İŞLİTH.İHR.TİC.S.LTD.ŞTİအနိုင်ရခဲ့သည်။ 69.354,06) ...
မြေပေါ်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, TCDD2။ ဝယ်ယူစီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက်, UlukışlaBoğazköprüလိုင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: (Haydarpasa-တူရကီနှင့်Ulukışla-Boğazköprüလိုင်းအတွက်) လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်းAlüminotermitအရင်းအမြစ်များ
Completed အလိုအလျောက်အဆင့် Crossing ဂိတ်တပ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်၏Bogazköprü-Ulukışlaလိုင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bogazköprü-Ulukışlaအလိုအလျောက်အဆင့် Crossing ဂိတ်များ၏လိုင်းဆောင်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကိုတွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသBogazköprü-Ulukışlaဒုတိယ Hatter မိုင်အကွာအဝေးခုနှစ်တွင်: 61 500 + အလိုအလျောက်အဆင့် Crossing ဂိတ်ကိုလည်းဆောင်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကိုတွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing မှပြားလုပ်ခြင်းချဉ်းကပ်အကြားတွင်Ulukışla-Boğazköprüလိုင်း
Kayseri - Boğazköprü - Ulukışlaမီးရထားစီမံကိန်း II ကို။ ဤနှစ်တွင်လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါကြေညာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်